Tonizia Mibilaogy: Novambra mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 4:05 GMT
Mankalaza ny faha 19 taonan'ny “Fanovan'ny 7 novambra” (1987) izay nitondra ny filoha Ben Ali teo amin'ny fahefana tao anatin'ny fanonganam-panjakana mihoso-drà nihatra tamin'i Habib Bourquiba, izay nanjaka nandritra ny 30 taona, niantso ny filoha Ben Ali mba hirotsaka hofidiana fanin-diminy amin'ny fifidianana hatao amin'ny taona 2009 ny minisitra talen'ny biraon'ny filoham-pirenena, Abdelaziz Ben Dhia, ny senatera Toniziana [Fr] sy ny mpikambana ao amin'ny sendikan'ny indostria, ny varotra sy ny Asa tanana (UTICA) . Maneho hevitra mikasika ny famaritan'ny mpanohitra toy ny fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana, nahatsikaritra ilay bilaogera Mokhtar Yahyaou fa aretina fiverenan'ny fomba fanao fitondram-panjaka tokana sy ireo beys [tompomenakely] izany:
Manakiana ny fitondran'i Ben Ali efa 19 taona, Stranger namoaka sary maromaro momba ny lohahevitra “19 taona”, ampy tena ampy. Ary ho an'i Mkarriz, efa nikasa ny hijanona eo amin'ny fitondrana i Ben Ali raha mbola mitempo ny fony.
Mouwaten Tounsi, izay voasivana ny bilaoginy taorian'ny namoahany taratasy ho an'ny filoha Ben Ali mandrisika azy hamarana ny tsy fahampian'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena, nanameloka ny fanapahan-kevitry ny mpanangona bilaogy vaovao Toniziana handràra azy tsy ho anaty tondro.
Ary ho setrin'ny sivana amin'ireo tranonkala tiany indrindra ao Tonizia, anisan'ireo ny deviantart.com, blogmarks.net, sy wikipedia.org, nanoratra ny lahatsorany farany i escalier7 ary nanazava ny antony nanapahany hevitra tsy hibilaogy intsony [Fr]:
Mitondra antsika amin'ny lohahevitra resahana be tamin'ny herinandro lasa teo amin'ireo bilaogera Toniziana izany: ny fanakanana ny wikipedia nandritra ny andro vitsivitsy. Amin'ity santionany milahatra manaraka ity, hitantsika ny fomba nanombohan'ny adihevitra sy ny niafarany:
- Ny tolakandron'ny 23 Novambra, nakatona ny fidirana tao amin'ny Wikipedia any Tonizia noho ny antony tsy fantatra.
- Ny 23 Novambra, manontany hoe ‘inona ity?‘(Qu'est-ce que c'est que ça?!) [FR], MetallicNaddou namoaka tao amin'ny blaoginy ny pikantsary misy ny pejy fahadisoana mipoitra rehefa niezaka niditra tao amin'ny wikipedia.
- Ny 24 Novambra, Kassus, bilaogera Toniziana nandray anjara tamin'ny wikipedia, nitatitra ny lisitry ny fandefasana Wikipedia frankôfôna [Fr], ary avy eo tao amin'ny bilaoginy, fa nakatona tao Tonizia ny wikipedia.
- Ho setrin'ny lahatsoratr'i Kassus[Fr], bilaogera sasany niantso fandraisana andraikitra amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka any amin'ny Sampandraharahan'ny Aterineto Toniziana (ATI) sy ny mpamatsy tolotra aterineto rehetra ao amin'ny firenena, miantso azy ireo hoe ‘Avereno aminay ny Wikipedia!’ ‘Rendez nous Wikipedia! ‘.
- 25 Novambra, nihevitra i Xander [Fr] fa tsy resaka sivana izany satria tsy miseho ny pejy fahadisoana 404 error malaza ao Tonizia izay miseho amin'ny tranokala voasivana rehefa miezaka miditra amin'ny wikipedia. Ho azy dia olana ara-teknika fotsiny izany, ary nanolotra fomba iray handrosoana sy hialàna amin'ilay sakana amin'ny alàlan'ny fanovana ny adiresy milina DNS izy.
- 25 Novambra, araka ny filazan'ny Mario tout de go, [Fr] mpandray anjara amin'ny lisitra Wikipedia frankôfônia, mety tranga iray amin'ny sivana amin'ny Wikipedia ao Tonizia [Fr] izany. Ao amin'ny lahatsorany, nanao fampitahana teo amin'ny sivana amin'ny wikipedia any Shina sy any Tonizia izy:
- 26 Novambra, maneho hevitra momba ny lahatsoratr'i Kassus [Fr], Cyberdissident nanome fijery vaovao momba ny adihevitra raha nanararaotra hiresaka ny maha zava-dehibe ny ady ho an'ny fahalalaham-pitenenana ao Tonizia izy. Ary na dia nahatsapa alahelo noho ny fanakatonana ny wikipedia ao amin'ny firenena aza izy, dia faly izy mahita ireo bilaogera mandray fepetra hanohitra izany.
Nampiteraka indray ny fihenjanana taloha sy mikorontana eo amin'ireo mpanohitra ny cyber sy ny bilaogera ny fanamarihany momba ny olana mampiady hevitra ao amin'ireo pejy Toniziana momba ny wikipedia.
- Ny 27 Novambra, nanambara ny olana mampiady hevitra momba ny wikipedia ihany koa i Houssein, mampifandray ny adihevitra mafana ao amin'ny pejin-dresaka ao amin'ny Wikipedia [Fr] mikasika an'i Tonizia eo amin'ilay mpandrindra Toniziana Kassus, sy ireo hafa akaiky ny mpanohitra an-tserasera.
- 27 Novambra, Erasoft niantso ireo mpitsidika ny bilaoginy mba handefa ilay taratasy maodely nosoratany ho an'ny masoivoho Toniziana any Frantsa ary nisarika ny saina mikasika ny fanakatonana ny wikipedia.
- 27 Novambra, “Oehh ! Tafaverina ny Wikipedia, raki-pahalalana misokatra. Tsy azonao an-tsaina ny hafaliako. Nahatsiaro reraka aho tato ho ato, tsy nisy ny tranonkala ankafiziko indrindra”. Hoy i Kaiser nanoratra tamin'ny teny manome fifaliana. Antenaina fa tsy ho tapaka tampoka ity vaovao mahafaly ity, na dia mbola tsy mazava aza ny antony nahatonga ilay sakana.
- Ny 28 Novambra, miverina amin'ny fifandonana mitranga eo amin'ny bilaogera sasany sy ny ampahany amin'ny mpanohitra an-tserasera, MetallicNaddou [Fr] nanolo-kevitra fa ny fifandraisana miorina amin'ny fanajana dia hanampy amin'ny fananganana tetezam-pitokisana:
Ao amin'ny Fikra [Fr], SBG nanoratra momba ny tondron'ny fikarohana momba ny demokrasia [PDF] navoakan'ny The Economist Intelligence Unit (EIU) tamin'ny herinandro lasa.
Laharana faha-135 amin'ireo firenena 167 nohadihadiana, sokajiana ho “fitondrana mpanao didy jadona” miaraka amin'ireo firenena 55 hafa i Tonizia . Amin'ireo firenena Arabo (jereo ny sary momba ny ny isan'ireo firenena Arabo manontolo), Palestina irery ihany (faha-79) no ao anatin'ny “demokrasia tsy lavorary”. Libanona (faha 85) sy Irak (faha-112) dia samy ao anatin'ny sokajy “fitondrana misy fifangaroana”. Ny sisa amin'ireo firenena Arabo dia sokajiana ho “fitondrana jadona”. Ary amin'ny isa 3,53 amin'ny ankapobeny, ny Afovoany Atsinanana sy Avaratra Afrika no faritra laharana ambany indrindra manerana izao tontolo izao (jereo ny sary momba ny demokrasia isa-paritra.